USA: Shirkado ku guulaystay qandaraaska gidaarka xadka Mexico laga dhisayo - BBC News Somali
USA: Shirkado ku guulaystay qandaraaska gidaarka xadka Mexico laga dhisayo
Maamulka Trump ayaa kala soo baxay afar shirkadood kuwii u tartamayey in ay qandaraaska ku qaatan gidaarkii madaxweynuhu sheegay ee mudadada la hadal hayey in laga dhisayo xadka Maraykanku la leeyahay Mexico, waxaanay shirkadahaasi ku guulaysteen samaynta muunadda gidaarka.
Amarka gidaarkan lagu dhisayo ayaa ahaa qaraarkii u horeeyey ee madaxweyne Trump saxeexay, waxaanu dhaliyey mudaharaaddo lagaga soo horjeedo oo ka dhacay labada dalba.
Gudoomiye ku xigeenka wakaaladda ilaalada xuduudaha, Ronald Vitiello, ayaa shir jaraa'id ka sheegay in qandaraaskii lagu dhisayey gidaarkaas la siiyey shirkado laga leeyahay gobollada Alabama, Arizona, Texas iyo Mississipi.
Qiimaha gidaarkan muunadda ahi ku kacayo ayaa gaadhi kara hal milyan oo doolar, intii uu ku jiray ololaha doorashadana wuxu Trump ku nuuxnuuxsaday in dalka Mexico bixin doono lacagta lagu dhisayo gidaarkaas.
Nashqadda iyo muunadda gidaarkan ayaa lagu samayn doonaa magaalada San Diego ee gobolka California.